Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fikolona ny zava-bita | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fikolona ny zava-bita
Tsy afaka misy afaka hanamaivana ny asa fanarenana ny trottoir manerana ny tanàna, samy mahazo an-tsaina ny vola adoboka ho fiantohana ny fanatanterahana an’izany. Maro moa ny fanakianana, na izany aza tsy ny fiadin-kevitra mikasika ny fietezana na tsia ny fandaharana an’io asa goavana io alohan’ny raharaha maro hafa mahamehana avokoa, no atao anton-dresaka eto. Ny fahafahana mitaiza ny zavatsoa niezahana ho fanatanterahana azy no mendrika atao resaka. Raha misy antony hanomezana rariny ny fiazakazahana hanefana an’ity asa ity, dia ny fitsinjovana ny mpandeha an-tongotra mba hamerenana amin’izy ireto ny fanajana mendrika azy.
Raha hiady moa dia manafatra ny anatra amin’ny fandanjalanjana ny herin’ny teny alohan’ny ananganam-bozona. Tsy misy maha samy hafa amin’izany rehefa hitetika fanaovana asa goavana, raha tsy tia hiatrika fatiantoka dia tsy afaka no tsy andanjalanja mialoha ny fahafahan’ny tena hikolo sy hitandro ny fahatezan’ny zavatra narenina na najoro. Lavitr’izay anefa ny fitrangan’ny toe-draharaha araky ny fahatazanan’azy etsy amin’iny làlana miainga avy etsy amin’ny Lycée Rasalama mankany Andravoahangy ambony. Omaly dia omaly nitohana tsy hoatran’izany ny fifamoivoizana nohon’ny asa famaranana an’ireo trottoir andanin’ny roa an’ny làlana, ny ampitso dieny ampitso ireny fa nandefitra sahady ny mpandeha an-tongotra voatery nidina afovoan-dàlana mba ahafahany mizotra, efa nosoavalin’ny fiara ny trottoir izay tsy namelaran’ny mpivarotra entana.
Dia ho tonga amin’ilay fitenenana hoe menaka ahoso-bato ve, ka ny aretina androany rahampitso ihany dia hiverina hiseho ? Na eo ampitazanana fotsiny aza dia tsapa ihany fa tsy tomombana araky ny maha fandanim-bola be mikasika ny asa ny fandinihana. Fanomezana haja ho an’ny mpandeha an-tongotra no heverina, raha eny atenatenany mba misy iray metatra sy sasany ny fivelaran’ny trottoir iny fa miha hety hatrany ary rehefa tonga any andohany zara raha misy atsasa-metatra izany hoe tsy ifanenana. Ny laza amin’ny filazana hoe tena miasa ve no hany enjehana ? Nohon’ny zava-misy na ny marimarina kokoa dia nohon’ny tsy fetezan’ny zava-maro dia voatery enjikenjehana daholo ny esty sy eroa ary samy maha maika avokoa. Izay indrindra anefa no tokony tsy anaovana vonjy maika. Sady mivoy ho an’ny anio no mihary ho an’ny taranaka no andraikitry ny fitondrana. Efa nositrahana ny faramandimby avokoa na ny fototra norafetin’Andrianampoinimerina na ireo nalamin’ny mpanjanaka vao lany manja sy nihoaran’ny toe-trandro ankehitriny, misy aza mbola tsy no kasihana ary mbola lovaina ny fampiasana azy. Firy taona ny ho avin’ireo trottoir vao narenina ireo ?